मन्त्रीको गाडीले पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएर झण्डा हल्लाउँदै भागेेपछि – PathivaraOnline
Home > समाचार > मन्त्रीको गाडीले पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएर झण्डा हल्लाउँदै भागेेपछि
admin January 3, 2021 January 3, 2021 समाचार	0
काठमाडौ । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको गाडीले एक पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएर भागेको छ । सर्लाहीको हरिवनमा मन्त्रीको गाडीले पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएको हो । ठक्कर दिएपछि सामान्य मानविय समवेदना समेत नराखेर मन्त्री भागेको भन्दै स्थानियले विरोध गरेका छन् । गाडीको ठक्करबाट घाइते भएका पैदलयात्रीको स्वाभिमान अस्पताल हरिवनमा उपचार भइरहेको छ ।
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको साह सवार ना १ झ ३८४२ नम्बरको जिपले लालबन्दी नगरपालिका–८ का ३० वर्षीय बच्चु तामाङलाई ठक्कर दिएको थियो । घाइते बच्चुलाई छोडेर मन्त्रीको गाडी भागेको थियो । दुर्घटनास्थलमा रहेका हरिवनस्थित चतुर्भुजेश्वर जनता बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति प्रज्वल ढुंगानाले सो दृष्य देखेका थिए ।
मन्त्री साह गृह जिल्ला रौतहटबाट महोत्तरीको जलेश्वरतर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको हो । ठक्कर दिने गाडीको अल्फाबेट देख्न नपाएका प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि मन्त्री साह चढेको गाडी रहेको पत्ता लागेको हो । प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले मन्त्री साह चढेको जिपले पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएको पुष्टि गरेका छन् ।
घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको र उनको उपचार भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । उनले यसबारे माथि जाहेर गरिसेको बताएँदै घाइतेको उपचार भइरहेको जानकारी दिए।
‘मन्त्रीज्यू चढेको जिपले पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिएको रहेछ, यसबारेमा माथि जाहेर गरिसकेका छौं,’ उनले भने।’
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृत्यु
मध्यरातमा कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका नर्सहरुकाे तस्बिर र भिडियाे?
राजधानीमा सक्रिय कोरोना: संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दो!
अतिविपन्न वर्गका बादी समुदाय एक्कासी छायो यस्तो खुशीयालीः भन्छन् – सरकार घर आँगनमै रहेछ